Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi laseDubai | Uhlu lwezinombolo zeselula | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi laseDubai
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi laseDubai
Izinombolo zocingo zebhizinisi laseDubai
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseDubai luhla lwezinombolo zocingo lwebhizinisi lekhwalithi enhle. Sinikezela lapha uhlu lwezinombolo zefoni oluvumelekile futhi oluqinisekisiwe. Ukufinyelela kwethu Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi laseDubai kuzokunikeza ithuba lokukhangiswa okuqondisiwe kunombolo enkulu yabantu abazothakazela imikhiqizo yakho kanye nezinsizakalo zakho. Ukufingqa echwebeni elisha elivikelekile, iDatabase Lokumiswa Kamuva Lokunikezwayo linikeze abafonayo isihlangu esivela kwisibopho se-TCPA sezingcingo ezingaphenduki ukuze baphinde baphinde babe nezinombolo zocingo ezijikelezayo uma basebenzise kahle i-database yenombolo yocingo eyabiwe kabusha. Finyelela kumininingo egcwele nethembekile kunazo zonke yezinombolo zocingo ze-GSM zezinombolo zeselula yakho yendawo oyitshengayo ngokusebenzisa ukuthengiswa kwetheknoloji nokusungula imephu yethu kwangaphambili. Wonke umuntu ufuna ukuhlala ethambekele kuma-Smartphones abo futhi amabhizinisi amaningi asebenzisa yonke imininingwane yedatha ye-Dubai.
Thenga Uhlu lwezinombolo Zebhizinisi laseDubai
Inani Lamarekhodi: 2050
Database yakamuva Yokuposa ingumthombo wohlu lwezinombolo zocingo lweDubai yangempela. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile futhi nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwebhizinisi, uhlu lweselula, igama lenkampani, izwe nekhodi ye-zip.
Uhla lwezinombolo zocingo lwebhizinisi laseDubai, luyinombolo yocingo enembile kakhulu futhi evuselelwe nohlu lwamaselula olungakuholela ekuthengeni okuhle nasekusebenziseni izingcingo, ukumaketha nge-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza. Ukuqinisekisa ngokuthuthuka kwebhizinisi lakho, ukumaketha okusebenzayo okusebenzayo kakhulu nokucacile noma ngokuqondile kumakhasimende akho alindelwe.
Uhlu lwefoni yebhizinisi laseDubai oluvela kuDatabase Lokungena Kamuva Lokusebenza oluqukethe idatha engama-2,050s aqoqiwe yohlu lwezinombolo zebhizinisi olufika ku- $ 600 luyinkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi inganyathelwa kalula kubuso bakho bekhompuyutha .
Idathabheki Yokugcina Imeyili inikezela ngohlu lwezinombolo zocingo oluqinisekiswe kakhulu futhi oluvuselelwe ukuvusa umkhankaso wokuthengisa ngocingo. Ukuthenga uhlu lwefoni yebhizinisi laseDubai kusuka eDatabase Lokumema Kamuva kuyindlela ehlakaniphile kunazo zonke yokuqalisa ibhizinisi lakho njengoba ungabona ukuthuthuka kwebhizinisi lakho, kusebenza kwiklayenti futhi kulungele ukufinyelela umamukeli wakho we-telemarketing.
I-Dubai Business Ucingo Umbuzo & Impendulo